Galatni WBOf Haa Tahu Kan Qabsoon Bilisummaa Oromoo Badii Jalaa oolle! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooGalatni WBOf Haa Tahu Kan Qabsoon Bilisummaa Oromoo Badii Jalaa oolle!
Galatni WBOf Haa Tahu Kan Qabsoon Bilisummaa Oromoo Badii Jalaa oolle!
Damee Boruu, Waxabajjii 6, 2019
WBO Zoonii Lixaa Godina Wallagga Bahaa Limmuu ganda Qarsaa Odaa bakka Dongoro jadhamutti lola Cimaa WBO fi RIP gidduutti gaggeeffameen Jaal Marroon Seenaa addaa hojjateera! Loltuu
Gargaarsa OPDO malee TPLF Uummata Oromoo wagga 27 miti wagga torba iyyuu dhidhiitee bituu hin dandeessu. Akeekaa fi Kaayyoon OPDOn irratti ijaaramte tokkummaa Uummata Oromoo kan diiguu fi humna Uummata Oromoo kan addaan facaasuu irratti hundeefamte akka tahe kan hojiin argaa turre. TPLF Oromiyaa wagga dhiba tokko bituuf sagantaa kan baafattee OPDO meeshaa godhachuudhaan tuire. Waggaa tokko duraa qabsoon Bilisummaa Uummata Oromoo dhiibee yaroo dhufu TPLF fi OPDO waan godhan isaan walaashise. Akka baran ilmaan Oromoo hidhuun, ajjeessuu fi doorsiisuun qabsicha caalaa finiinse malee of duuba deebisuu hin dandeenye. Sadarkaa kana irratti TPLF kan maqaa Mootummaa EPRDFiin biyya bitu torbaan sadiif teessoo gochuun shira Qabsoo Bilsummaa Oromoo ukkamsu xaxxe ofii keessaa luqqifattee baate.
Karaan tokkichi Qabsoon Bilisummaa Oromoo bacancaru, diigamuu fi galma hin gahiin hafu yoo aangoo OPDOf dabarsan qofa akka tahe hubatanii irratti waliif galan. OPDO keessatti ijoollee bara dheeraa tajaajjilanii guddifatan gara aangoo ol fidatan. Karaa tasgabaa’een qabeenya ishee fudhatee TPLF gara naannoo ishee deebitee humna ishee jabeefachuun humna isheetti dhufu of irraa ittisuuf qophii guddaa gudhate. Har’as godhachaas jirti. Warri miseensa OPDO tahee ijaaramu keessatti warri aangoo qabatan warra jibinsa Oromoo qabanii fi Oromo tahuu isanii wakkatan tahuu qabu. Keessattu ilmaan nafxanyaa afaan Oromoo dubbatna tahuun filatamaa dha. Miseensa OPDO tahuu namni tokko afaan Oromoo yoo dubbate gahaa dha. Namni haqa Oromoof dhaabbatuu fi mirga Oromoof laalatuu galmi isaa akkuma Oromoo biraa mana hidhaa, hojii irraa ari’amuu ykn du’a taha.
Warri TPLF aangoo badhaaftee biraa deemtee kun warra farra Orommumman beekkaman warra Qbsoo Bilisuumma Oromoo diigaa fi facaasaa ture, warra Itoophiyummaan isaanii amansiisa tahe akka tahan wal nama hin attakarsiisu. Aanggootti dhufuun isaanii Mootummaa EPRDF haaromsuu fi Impaayeera Itoophiyaa akka hin jigne tiksuuf malee Qabsoo Bilisummaa Oromoof waan faayidaa qabu hojjechuuf akka hin taane bareechinaa beekna. Warri shira kan hubachuu dandeenyu iyyaa turre.An karaa koof Uummatni Oromoo TPLF dura OPDO daandii qabsoo bilisummaa irraa kaasuu akka qabu dedeebisee iyyeera. Qabsoo Bilisummaa Oromoof kaleessas, har’as, borus gufuu guddaan OPDO dha.
Diinni Uummata Oromoo yaroo jalqaba nama Oromoo jajjaba akka Goobanaa Daaccii qabatee Oromoo cabse. Sana booda Mootummaan Habashaa dhufaa darban namoota Oromoo tahan bitatee Uummata Oromoo cabsuu fi bituu tooftaa godhate itti fufe. Kan nama dhibu immoo namootni akka Haayilee Selaassee fi Mangistuu Haayilee Mariyam dhalootan Oromoo yaroo jedhan yoo dhugaa tahee gadda guddaa namatti uuma. Garuu sabni isaan keessa dhalatan haqa ilma nama dhabee yaroo dhidhitamee jiraatu maaliif gammachiisu argatanii jiraachuu danda’an? Waan isaa faallaa uumaa ti.
Namonni dantaa mataa isaanii jaallatan tasa saboonummaa qabachuu hin danda’an. Kanaaf jecha saba isaanii miti haadhoon isaanii kan garaa tokko keessaa wajjin dhalatan illee yoo du’e dhimmaa hin qaban. Haalli ayyaana ilaallannaa kun bara dheeraaf Uummata Oromoo keessatti deemaa turee. TPLF warra Oromoo iyyuu tahanii Uummata Oromoo lafa irraa duguganii balleessuuf hawwii fi dandeetti qaban ijaarachuun rakkisaa hin turre. OPDOn ergamtuu duwwaa miti. Ergaa(Mission) qabdi. Ergaan ishee inni duraa Saboonummaa Oromoo balleessu dha. Itti aanse Oromoo fi Oromiyaa Itoophiyaawii gochuu dha.
Maaliif Uummatni Oromoo wareegama guddaa hiriyyaa hin qabne baasee wagga tokkof harka qullaa gallee, kan bara darban caalu hidhaan, ajjeechaan, saamamuu fi qe’ee isaa irra buqqa’uun isa muddate? gaaffii jedhu deebisuun rakkisaa dha. Tokkofaan ijaarsi Oromoo qophii aangoo diina harkaa butachuu danda’u waan hin qabneef, aangoon salphaatti gara harka OPDO ce’uun filmaata hin qabu. Eenyummaa OPDO utuu beenku maaliif Uummatni Oromoo aanggo OPDO itti kennee taa’e ilaalaa ture? Gaaffii kana karaa lama ilaaluu qabna. Inni duraa Midiyaa OMN fi Jawaar “ilmaan Abbaa Gadaa Masaraa Miniliki” seenan yaroo jedhu afaanfajjii guddaa uummata keessatti uume. Utuu Uummatni Orommoo keessattu Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabsoo isaa finiinsee itti fufee jiraatee OPDOn Uummata Oromoo naannoo fi amantiin gargar qooduuf ayyaana guddaa qabdi ture.
Yaroo keenuun akka maalummaa OPDO Uummatni Oromoo biratti saaxila baatu hedduu nu gargaaree jira. Warri” ijoollee Abbaa Gadaa Masaraa Miniliki seente “jedhee ayyaan -ilaallatoota Uummata Oromoo kijibuuf of gurgure. Ijoolleen Abbaa Gadaa Masaraa Miniliki galuuf hawwii hin qaban. Ijoollen Abbaa Gadaa Masaraa Miniliki muziyeemii(museum) saba fi sablammii Impaayeera Itoophiyaa godhu malee keessa jiraachuuf hin haarofatan. Kan Masraa Miniliki gale diqaalota Habashaa akka tahan dagachuu hin qabnu. Mee ilaala ammam OPDOn gadi baduu akka taate. Yakka Mootummaan TPLF fi waraanni Wayyaane Uummata Oromoo irratti takka hin dalagne Uummata Oromoo irratti raawwachaa jirti. Kana utuu aggarruu maal jennee OPDO ijaarsa Oromoo jennee fudhachuu dandeenya? Warra Oromoo ofiin jechuu lagatuu fi waakkatu nuyi maaliif Oromoo jennee waamuu qabna? OPDOn akka ijaarsatti diina Uummata Oromoo keessa isa duraa ti. Ijaarsa hawwii fi fedhii Uummata Oromoof hin dhaabbanne dha. Uummatni Oromoo hiree abba biyyummaa isaa murteefachuuf waan hundaa dura OPDO ofii jalaa maqsuu qaba.
Galatni WBOf haa tahu malee qabsoon Bilisummaa Oromoo har’a badii jalaa oollee jira. Waaqayyoo qaanii bara 1992 jalaa waan nu baaseef galata haa qabatu. Gachanaa fi Goota Oromoo, WBO xiyyaaraa fi kamikaalli fixxuu danda’u hin jiru. WBO kan diiguu fi facaasuu danda’u warra bitamtuu , ayyaan-ilaallatuu fi kijibduu akka Koree Teknikaa ofiin jettu duwwaa dha. Har’a uummatni keenya xiqqaa fi guddaan biyya keessaa fi ala jirruu WBO fi QBO wajjin hirirree bilisummaa keenyaaf wardiyaa dhaabbachuun dirqama hunda keenyaa ti.
Gadaan Gadaa Bilsisummaa Ti!
Waamicha Qabsoo Bifa Haaraadhaan Qeerroon Bilisummaa Oromoo Kan Yaame Fakkeessamee ...
Waamicha Qabsoo Bifa Haaraadhaan Qeerroon Bilisummaa Oromoo Kan Yaame Fakkeessamee Ibsi Naannessamaa Jiru Qeerroo Bilisummaa…
Injifannoo fi Galatni Kan uummata Oromoo Hundaafi Qeerroo Bilisummaa Oromooti!
Injifannoo fi Galatni Kan uummata Oromoo Hundaafi Qeerroo Bilisummaa Oromooti! Ibsa Gabaabaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo…
Akaas malee yaa goottaakoo!!
Injifannoo Uummata Oromoofi!!!